Ikhadi leshishini leFlash Drive | Martech Zone
Ikhadi leshishini leFlash Drive
NgoLwesihlanu, Februwari 1, 2013 NgeCawa, ngoMatshi 24, 2013 Douglas Karr
Ukuba uyifundile le bhlog okwethutyana, uyazi ukuba ndiyincutshe yetekhnoloji… kunye namakhadi eshishini. Xa ndidibana nomntu aze andinike ikhadi, ndigweba kakubi. Izolo, ndadibana noRob Bacallao ukusuka Abasebenzi abukhali kwaye wandinika obu buhle:
Ikhadi leshishini lokuqhuba elisebenza ngokufihlakeleyo ukusuka Iflashbay kulungile-ukuza kwi-2Gb, 4Gb, 8Gb kunye ne-16Gb, nantsi inkcazo ye-Intanethi:
Ikhadi le-Wafer USB lelinye lawona makhadi e-USB acekeceke emhlabeni kubukhulu nje be-2.2mm. Omabini amacala ekhadi le-USB anokuba yimifanekiso eshicilelweyo ngokupheleleyo ngombala ogqamileyo. Indawo enkulu enophawu iya kuqinisekisa ukuba ilogo yakho ibaluleke kakhulu-uninzi lweenkampani zikhetha ukungenisa uyilo olupheleleyo lokugubungela lonke ikhadi le-USB endaweni yelogo ezimeleyo. Amakhadi e-USB atyibilika kakuhle epokothweni yakho, kwisipaji okanye kumququzeleli kwaye uthathe indawo encinci.
Kubonakala ngathi ndingumfoti wevidiyo, bendiya kuthenga iibhokisi zezi ziphose iisampulu kuzo!
tags: ikhadi leshishiniikhadi loshishinoiflashbayifleshi DrayivuTechikhadi lomtya
Ukukhutshelwa kweaudiyo nevidiyo kwenziwa ngokulula: I-Speechpad
Iimpawu ezi-11 eziphezulu zeWindows 8
Feb 1, 2013 ngo-11: 03 AM
Ukrelekrele. Oko bekuya kuba kuhle kwiminyaka eyi-5 eyadlulayo, kodwa ngoku ndicinga ukuba ikhonkco kwiYouTube okanye kwiVimeo iya kufaneleka ngakumbi.
Feb 1, 2013 ngo-11: 10 AM
Kwaye kuyabiza kancinci…. kodwa hayi kamnandi! 🙂
Feb 2, 2013 ngo-11: 32 AM
Kungcono ukunciphisa abo bafowunelwa bakho abafanelekileyo. Babiza phakathi kwe-$ 7 ukuya kwi-$ 10 / nganye.
Feb 2, 2013 ngo-7: 29 PM
Konke kumalunga nembuyekezo… kodwa zibiza.